ဒီကမ္ဘာကြီး ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အဆုံးတိုင်သွားမလဲ — ကင်းမျှော်စင် အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်
က၁၂ ၉/၁၅ စာ. ၃-၇
ယေဟောဝါက ဘယ်သူလဲဆိုတာ တိုင်းနိုင်ငံတွေ သိရကြမယ်
ဘုရားသခင်ရဲ့ အဓိကရန်သူ ဘာဖြစ်သွားမလဲ
ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိခင် ဖြစ်ပျက်လာမယ့် အရာတွေ
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်က ရန်သူတွေအပေါ်အောင်ပွဲခံဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော် စိုးစံပြီ
“သင်တို့သည် မှောင်မိုက်တွင် ရှိနေသူများ မဟုတ်ကြ။ သို့ဖြစ်၍ သူခိုးကို ဖမ်းမိသကဲ့သို့ ထိုနေ့ရက်သည် သင်တို့ကို အုပ်မိလိမ့်မည်မဟုတ်။”—၁ သက်. ၅:၄။
အောက်ပါကျမ်းချက်တွေမှာ မမြင်ရသေးတဲ့ ဘယ်အဖြစ်အပျက်တွေကို ဖော်ပြထားသလဲ။
၁ သက်သာလောနိတ် ၅:၃
ဒံယေလ ၂:၄၄၊ ၄၅
၁။ စောင့်နေဖို့နဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ခံရပ်နိုင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာက ကူညီပေးမလဲ။
မကြာခင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ် အဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်ပျက်လာပါတော့မယ်။ ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်တွေ ပြည့်စုံတာက အဲဒီလိုတကယ်ဖြစ်လာမယ်လို့ အခိုင်အမာဖော်ပြတယ်၊ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့က စောင့်နေဖို့လိုတယ်။ စောင့်နေဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာကကူညီပေးမလဲ။ တမန်တော်ပေါလုက “မမြင်ရသောအရာများကို ကြည့်မှတ်နေ” ပါလို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကောင်းကင်မှာဖြစ်စေ၊ မြေကြီးမှာဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိမယ့် ထာဝရအသက်ဆုကို စိတ်စွဲလမ်းနေရမှာဖြစ်တယ်။ ကျမ်းချက်ရဲ့အထက်အောက်စကားမှာ ဖော်ပြတဲ့အတိုင်း ပေါလုဟာ ယုံကြည်သူချင်းတွေရဲ့ သစ္စာရှိလမ်းစဉ်ကြောင့် ရရှိလာမယ့် အကျိုးရလဒ်ကို အာရုံစိုက်ဖို့ သူတို့ကို တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ ဒီလိုလုပ်တာက ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကို ခံရပ်နိုင်ဖို့လည်း ကူညီပေးတယ်။—၂ ကော. ၄:၈၊ ၉၊ ၁၆-၁၈; ၅:၇။
၂။ (က) ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကို အမြဲရှင်သန်နေစေဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ။ (ခ) ဒီဆောင်းပါးနဲ့ နောက်ဆောင်းပါးမှာ ဘယ်အကြောင်းသုံးသပ်ကြမလဲ။
၂ ပေါလုရဲ့သတိပေးချက်မှာ အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုပါတယ်– ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကို အမြဲတမ်း ရှင်သန်နေစေချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့မျက်စိရှေ့မှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေကိုကျော်ပြီး ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ အခုအချိန်မှာ မမြင်ရသေးတဲ့ အရေးပါတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို အာရုံစိုက်ဖို့လိုတယ်။ (ဟေဗြဲ ၁၁:၁; ၁၂:၁၊ ၂) ဒါကြောင့် ဒီဆောင်းပါးနဲ့ နောက်ဆောင်းပါးမှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထာဝရအသက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ဆက်နွှယ်နေတဲ့ အနာဂတ်အဖြစ်အပျက်ဆယ်ခုကို လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။
၃။ (က) ၁ သက်သာလောနိတ် ၅:၂၊ ၃ အရ အနာဂတ်မှာ ဘယ်အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပျက်လာမလဲ။ (ခ) နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေက ဘယ်လိုပြောကြမလဲ။ ဘယ်သူတွေက အဲဒီအတိုင်း လိုက်ပြောကြမလဲ။
၃ အနာဂတ်မှာဖြစ်ပျက်မယ့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ပေါလုက သက်သာလောနိတ်အသင်းတော်ထံရေးတဲ့စာမှာ ဖော်ပြခဲ့တယ်။ (၁ သက်သာလောနိတ် ၅:၂၊ ၃ ကိုဖတ်ပါ။) သူ့ရဲ့စာမှာ ‘ယေဟောဝါရဲ့နေ့ရက်’ အကြောင်း ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒီ ‘ယေဟောဝါရဲ့နေ့ရက်’ ဟာ အယူမှားဝတ်ပြုရေးကို ဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့အစပြုပြီး အာမဂေဒုန်စစ်ပွဲမှာ အဆုံးသတ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ယေဟောဝါရဲ့နေ့ အစမပြုခင်လေးမှာ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေက “ငြိမ်းချမ်းပြီ၊ လုံခြုံပြီ” လို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒါက အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ဆက်တိုက်ဖြစ်လာမယ့် အဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တိုင်းနိုင်ငံတွေက ကမ္ဘာ့ပြဿနာကြီးတွေကို ဖြေရှင်းလို့ရတော့မယ်လို့ ယူဆကြမယ်။ ဝတ်ပြုရေးခေါင်းဆောင်တွေကကော။ သူတို့လည်း လောကရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး “ငြိမ်းချမ်းပြီ၊ လုံခြုံပြီ” လို့ပြောနိုင်တယ်။ (ဗျာ. ၁၇:၁၊ ၂) ဝတ်ပြုရေးခေါင်းဆောင်တွေက ရှေးခေတ်ယုဒမှာရှိတဲ့ အယူမှားပရောဖက်တွေလုပ်သလို လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ယေဟောဝါက သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုပြောတယ်– “သူတို့က ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ ‘ငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်၊ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်’ လို့ပြော” ကြတယ်။—ယေ. ၆:၁၄၊ ကဘ; ၂၃:၁၆၊ ၁၇။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့က တခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲ ဘာကို သိရှိကြသလဲ။
၄ “ငြိမ်းချမ်းပြီ၊ လုံခြုံပြီ” ဆိုတဲ့စကားကို ဘယ်သူပဲပြောပါစေ ဒါက ယေဟောဝါရဲ့နေ့ကြီး အစပြုပြီဆိုတာ ဖော်ပြတယ်။ ဒါကြောင့် ပေါလု ဒီလိုပြောနိုင်ခဲ့တယ်– ‘ညီအစ်ကိုတို့ သင်တို့သည် မှောင်မိုက်တွင်ရှိနေသူများ မဟုတ်ကြ။ သို့ဖြစ်၍ သူခိုးကိုဖမ်းမိသကဲ့သို့ ထိုနေ့ရက်သည် သင်တို့ကို အုပ်မိလိမ့်မည်မဟုတ်။ အကြောင်းမူကား သင်တို့ရှိသမျှသည် အလင်း၏သားများ ဖြစ်ကြ၏။’ (၁ သက်. ၅:၄၊ ၅) လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမ်းစာရှင်းပြတာတွေကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ကြတယ်၊ လူအများစုကတော့ နားမလည်ကြဘူး။ “ငြိမ်းချမ်းပြီ၊ လုံခြုံပြီ” လို့ပြောကြမယ်ဆိုတဲ့ ပရောဖက်ပြုချက်က ဘယ်လောက်အထိ အတိအကျ ပြည့်စုံလာမလဲ။ ဒါကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် “နိုးကြားလျက် သတိရှိနေ” ဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြစို့။—၁ သက်. ၅:၆; ဇေ. ၃:၈။
၁ “ငြိမ်းချမ်းပြီ၊ လုံခြုံပြီ” ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်
၂ တိုင်းနိုင်ငံတွေက “မဟာဗာဗုလုန်” ကို တိုက်ခိုက်၊ ဖျက်ဆီးခြင်း
၃ ယေဟောဝါရဲ့လူမျိုးကို တိုက်ခိုက်ခြင်း
၅ စာတန်နဲ့ ကောင်းကင်တမန်ဆိုးတွေ တွင်းနက်ကြီးထဲ ပစ်ချခံရခြင်း
၅။ (က) “ကြီးစွာသောဒုက္ခ” ဘယ်လိုစမလဲ။ (ခ) ဘာအဖြစ်ဆိုးမှ ကျရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထင်နေတဲ့ “ဘုရင်မ” နဲ့တူတဲ့သူက ဘယ်သူလဲ။
၅ နောက်ထပ် ဘာဖြစ်လာဦးမလဲ။ ပေါလု ဒီလိုပြောခဲ့တယ်– “‘ငြိမ်းချမ်းပြီ၊ လုံခြုံပြီ’ ဟု လူတို့ဆိုစဉ်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမ၌ သားဖွားခြင်းဝေဒနာ ရောက်သကဲ့သို့ မမျှော်လင့်သော ပျက်စီးခြင်းဘေးသည် သူတို့အပေါ်သို့ ရုတ်ခြည်းကျရောက်လိမ့်မည်။” ပျက်စီးခြင်းဘေးက ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အယူမှားဝတ်ပြုရေးအားလုံးကို တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ အစပြုမှာဖြစ်တယ်။ သမ္မာကျမ်းစာက အယူမှားဝတ်ပြုရေးကို “မဟာဗာဗုလုန်” ဒါမှမဟုတ် “ပြည့်တန်ဆာ” လို့ခေါ်တယ်။ (ဗျာ. ၁၇:၅၊ ၆၊ ၁၅) ဒီတိုက်ခိုက်မှုက ခရစ်ယာန်ဘောင် အပါအဝင် အယူမှားဝတ်ပြုရေးအားလုံးအပေါ် ကျရောက်မှာဖြစ်ပြီး ဒါက “ကြီးစွာသောဒုက္ခ” ရဲ့အစဖြစ်တယ်။ (မ. ၂၄:၂၁; ၂ သက်. ၂:၈) လူများစွာအတွက် ဒါက အံ့ဩစရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းကတော့ ပြည့်တန်ဆာဟာ အဲဒီအချိန်အထိ သူ့ကိုယ်သူ “မည်သည့်အခါမျှ မြည်တမ်းရမည်မဟုတ်” တဲ့ “ဘုရင်မ” အဖြစ် ယုံကြည်စိတ်ချခဲ့လို့ပဲ။ သူ့အပေါ် ဘာအဖြစ်ဆိုးမှ ကျရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ သူထင်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့တွက်ကိန်း မှားသွားပြီဆိုတာကို သူရုတ်တရက် သိရလိမ့်မယ်။ သူဟာ “တစ်ရက်အတွင်း” ဖျက်ဆီးခံရသလို အလျင်အမြန် ပျက်စီးသွားပါလိမ့်မယ်။—ဗျာ. ၁၈:၇၊ ၈။
၆။ အယူမှားဝတ်ပြုရေးကို ဘယ်သူက ဖျက်ဆီးမလဲ။
၆ “ချိုဆယ်ချောင်း” ပါတဲ့ “သားရဲ” က ပြည့်တန်ဆာကို တိုက်ခိုက်မယ်လို့ သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြတယ်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါ သားရဲက ယူအဲန်ကို ပုံဆောင်တယ်၊ “ချိုဆယ်ချောင်း” က “နီမြန်းသောသားရဲ” ကို ထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံးကို ပုံဆောင်တယ် ဆိုတာသိရတယ်။* (ဗျာ. ၁၇:၃၊ ၅၊ ၁၁၊ ၁၂) ဒီတိုက်ခိုက်မှုက ဘယ်လောက်အထိ ထိခိုက်ပျက်စီးစေမလဲ။ ယူအဲန်ရဲ့အဖွဲ့ဝင် တိုင်းနိုင်ငံတွေက ပြည့်တန်ဆာရဲ့စည်းစိမ်တွေကို လုယူ၊ သူ့ရဲ့ဇာတိရုပ်အမှန်ကို ဖော်ထုတ်၊ သူ့ရဲ့ကိုယ်ကို ကိုက်ဖဲ့ပြီး “သူ့ကို လုံးလုံးမီးရှို့ပစ်လိမ့်” မယ်။ ဒီလိုနဲ့ အယူမှားဝတ်ပြုရေးကိုပုံဆောင်တဲ့ ပြည့်တန်ဆာဟာ မရှုမလှ ဇာတ်သိမ်းသွားပါလိမ့်မယ်။—ဗျာ. ၁၇:၁၆ ကိုဖတ်ပါ။
၇။ “သားရဲ” ရဲ့တိုက်ခိုက်မှု ဘယ်လိုအစပြုမလဲ။
၇ ဒီတိုက်ခိုက်မှု ဘယ်လိုအစပြုမလဲဆိုတာကိုလည်း သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်က ဖော်ပြတယ်။ ယေဟောဝါက ပြည့်တန်ဆာကို ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတဲ့ “မိမိ၏အကြံတော်ကိုဖော်ဆောင်” ဖို့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ လှုံ့ဆော်မှာဖြစ်တယ်။ (ဗျာ. ၁၇:၁၇) ဝတ်ပြုရေးဟာ စစ်ပွဲတွေကို ဖြစ်ပွားစေပြီး ပြဿနာများစွာကို ဆက်ဖန်တီးနေတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည့်တန်ဆာကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ တိုင်းနိုင်ငံတွေက ယူဆကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတာက သူတို့ရဲ့သဘောအတိုင်း လုပ်တာလို့ သူတို့က ယူဆကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ ဒါက အယူမှားဝတ်ပြုရေးအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ သူတို့ကို ဘုရားသခင် အသုံးပြုလိုက်တာပဲ။ ဒါကြောင့် စာတန့်စနစ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုက စာတန့်စနစ်ရဲ့ နောက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို တိုက်ခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို စာတန် ဘယ်လိုမှ တားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။—မ. ၁၂:၂၅၊ ၂၆။
၈။ ဘယ်အခြေအနေကို “မာဂေါဂပြည်သား ဂေါဂမင်း” ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ် ဖော်ပြသလဲ။
၈ အယူမှားဝတ်ပြုရေး ဖျက်ဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မှာ ဘုရားသခင့်လူမျိုးတွေက “မြို့ရိုးမရှိ” တဲ့ “ငြိမ်ဝပ်သောပြည်သား” တွေ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ (ယေဇ. ၃၈:၁၁၊ ၁၄) ယေဟောဝါကို ဆက်ဝတ်ပြုနေပြီး အကာအကွယ်မဲ့နေသူတွေလို့ ထင်ရတဲ့ ဒီအုပ်စု ဘာကြုံတွေ့ရမလဲ။ သူတို့က ‘လူတွေ’ ရဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရမယ့်ပုံ ပေါက်နေတယ်။ ဒီအခြေအနေကို “မာဂေါဂပြည်သား ဂေါဂမင်း” ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ် သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြတယ်။ (ယေဇကျေလ ၃၈:၂၊ ၁၅၊ ၁၆ ကိုဖတ်ပါ။) ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လို ရှုမြင်သင့်သလဲ။
၉။ (က) ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအတွက် အရေးကြီးဆုံးအရာက ဘာလဲ။ (ခ) ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း ခိုင်ခံ့ဖို့ အခု ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
၉ ဘုရားသခင့်လူမျိုး တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုတာ ကြိုတင်သိရပေမဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ အရမ်း မစိုးရိမ်ကြပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခံရဖို့ထက် ယေဟောဝါရဲ့နာမည် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်စေဖို့နဲ့ ကိုယ်တော့် အကြွင်းမဲ့ပိုင်သအုပ်စိုးခွင့် သံသယကင်းရှင်းဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ “ငါက ယေဟောဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာ သင်တို့သိရလိမ့်မယ်” ဆိုတဲ့စကားကို ယေဇကျေလကျမ်းမှာ အကြိမ် ၆၀ ထက်မက ယေဟောဝါ ပြောခဲ့တယ်။ (ယေဇ. ၆:၇၊ ကဘ) ယေဇကျေလပရောဖက်ပြုချက်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ဒီအပိုင်း ဘယ်လိုပြည့်စုံလာမယ်ဆိုတာကို ကျွန်ုပ်တို့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ ယေဟောဝါက မိမိရဲ့စကားနားထောင်သူတွေကို စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းထဲက ဘယ်လိုကယ်တင်ရမယ်ဆိုတာကို သိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်စိတ်ချကြတယ်။ (၂ ပေ. ၂:၉) တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျွန်ုပ်တို့က ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းကို ခိုင်ခံ့စေမယ့် အရာမှန်သမျှကို လုပ်ဆောင်လိုကြတယ်၊ ဒါမှ ဘယ်လိုစမ်းသပ်မှုမျိုးပဲ ကြုံရပါစေ ယေဟောဝါအပေါ် ဆက်ပြီး သစ္စာတည်ကြည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ ဆုတောင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာ၊ တွေးတောဆင်ခြင်ပြီး တခြားသူတွေကို ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သတင်း ဟောပြောသင့်တယ်။ ဒါတွေကို လုပ်နေခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထာဝရအသက်မျှော်လင့်ချက်က “ကျောက်ဆူးသဖွယ်” မြဲမြံရှင်သန်နေမှာဖြစ်တယ်။—ဟေဗြဲ ၆:၁၉; ဆာ. ၂၅:၂၁။
၁၀၊ ၁၁။ အာမဂေဒုန် ဘယ်လို အစပြုမလဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဘာဖြစ်လာမလဲ။
၁၀ ယေဟောဝါရဲ့ကျေးကျွန်တွေ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါ ဘယ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာ အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပျက်မလဲ။ ယေဟောဝါက ယေရှုနဲ့ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေတွေကိုသုံးပြီး မိမိရဲ့လူမျိုးကို ကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ (ဗျာ. ၁၉:၁၁-၁၆) ဒီကြားဝင်လုပ်ဆောင်မှုက ‘အတိုင်းအဆမဲ့တန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏နေ့ကြီးတွင်တိုက်မည့် စစ်ပွဲ’ အာမဂေဒုန် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။—ဗျာ. ၁၆:၁၄၊ ၁၆။
၁၁ မာဂေါဂကို တိုက်ခိုက်မယ့် ဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယေဟောဝါ ဒီလိုပြောခဲ့တယ်– “အချုပ်အခြာအာဏာရှင် ယေဟောဝါ ဒီလိုပြောတယ်– ‘ငါက ငါ့ရဲ့တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ ဂေါဂကိုတိုက်ဖို့ ဓားကိုခေါ်လိုက်မယ်။ လူတိုင်းက ကိုယ့်ညီအစ်ကိုကို ဓားနဲ့သတ်လိမ့်မယ်။’” စာတန့်ဘက်တော်သားတွေက အထိတ်တလန့်နဲ့ ရှုပ်ယှက်ခတ်ကုန်ပြီး ဝရုန်းသုန်းကားနဲ့ အချင်းချင်း ပြန်သတ်ကြလိမ့်မယ်။ ယေဟောဝါ ဒီလိုပြောတယ်– “သူ့ [ဂေါဂ]အပေါ်၊ သူ့စစ်တပ်တွေအပေါ်၊ သူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ လူတွေအပေါ် . . . မီးတွေ၊ ကန့်တွေကို သဲကြီးမဲကြီး ရွာချစေမယ်။” (ယေဇ. ၃၈:၂၁၊ ၂၂၊ ကဘ) ဘုရားသခင် အဲဒီလို လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ ဘာအကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်လာမလဲ။
၁၂။ တိုင်းနိုင်ငံတွေက ဘာကို မဖြစ်မနေ အသိအမှတ်ပြုကြရမလဲ။
၁၂ မိမိတို့ဟာ ယေဟောဝါရဲ့အမိန့်တော်ကြောင့် ဖျက်ဆီးခံရတယ်ဆိုတာ တိုင်းနိုင်ငံတွေ သိကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စာတန့်ဘက်တော်သားတွေက ပင်လယ်နီရောက်တဲ့အထိ အစ္စရေးလူတွေနောက် လိုက်ခဲ့တဲ့ ရှေးခေတ်အီဂျစ်လူတွေလို ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအီဂျစ်လူတွေက ‘ယေဟောဝါဟာ အစ္စရေးတွေဘက်ကနေ ငါတို့ကို စစ်တိုက်နေတယ်’ လို့ ပြောခဲ့ကြတယ်။ (ထွ. ၁၄:၂၅၊ ကဘ) မှန်ပါတယ်၊ တိုင်းနိုင်ငံတွေက ယေဟောဝါဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ မဖြစ်မနေ အသိအမှတ်ပြုရပါလိမ့်မယ်။ (ယေဇကျေလ ၃၈:၂၃ ကိုဖတ်ပါ။) ဒါတွေဖြစ်ပျက်ဖို့ ဘယ်လောက်အထိ နီးကပ်နေပြီလဲ။
၁၃။ ဒံယေလကျမ်းမှာပါတဲ့ ရုပ်တုရဲ့ ငါးခုမြောက်အစိတ်အပိုင်းအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ဘာသိရသလဲ။
၁၃ ဒံယေလကျမ်းမှာပါတဲ့ ပရောဖက်ပြုချက်တစ်ခုက ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကာလကို သိရှိအောင် ကူညီပေးတယ်။ ဒံယေလက သတ္တုအမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ လူရုပ်တုတစ်ခုအကြောင်း ဖော်ပြခဲ့တယ်။ (ဒံ. ၂:၂၈၊ ၃၁-၃၃) အဲဒီရုပ်တုက အတိတ်နဲ့ လက်ရှိအချိန်အထိ ဘုရားသခင့်လူမျိုးအပေါ် ဩဇာလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့အာဏာစက်တွေကို ပုံဆောင်တယ်။ အဲဒါတွေက ဗာဗုလုန်၊ မီဒို-ပါးရှား၊ ဂရိ၊ ရောမနဲ့ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်ုပ်တို့အချိန်မှာ တည်ရှိနေတဲ့ နောက်ဆုံးအာဏာစက်ဖြစ်တယ်။ ဒံယေလပရောဖက်ပြုချက်ကို လေ့လာတဲ့အခါ ရုပ်တုရဲ့ ခြေဖမိုး၊ ခြေဖဝါးနဲ့ ခြေချောင်းတွေက ဒီနောက်ဆုံးကမ္ဘာ့အာဏာစက်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာ သိရတယ်။ ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ ဗြိတိန်နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အထူးမဟာမိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဒံယေလပရောဖက်ပြုချက်ရဲ့ ငါးခုမြောက် အစိတ်အပိုင်းက အင်္ဂလိပ်-အမေရိကန် ကမ္ဘာ့အာဏာစက်ဖြစ်တယ်။ ခြေဖမိုး၊ ခြေဖဝါးက ရုပ်တုရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တယ်၊ ဒါက လူသားတွေအုပ်ချုပ်မယ့် နောက်ထပ် ကမ္ဘာ့အာဏာစက် မရှိတော့ဘူးဆိုတာ ဖော်ပြတယ်။ ခြေဖမိုး၊ ခြေဖဝါးနဲ့ ခြေချောင်းတွေမှာ သံနဲ့သရွတ် ရောနေတယ်။ ဒါက အင်္ဂလိပ်-အမေရိကန် ကမ္ဘာ့အာဏာစက်ရဲ့ မခိုင်မာတဲ့အခြေအနေကို ဖော်ပြတယ်။
၁၄။ ဘယ်ကမ္ဘာ့အာဏာစက်က အာမဂေဒုန်ရောက်တဲ့အထိ အုပ်စိုးနေမလဲ။
၁၄ ဒီပရောဖက်ပြုချက်မှာ ၁၉၁၄ ခုနှစ်မှာ တောင်ပေါ်ကနေ ပဲ့ထွက်လာတဲ့ ကျောက်တစ်လုံးက ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကို ပုံဆောင်တယ်။ တောင်က ယေဟောဝါရဲ့အကြွင်းမဲ့ပိုင်သအုပ်စိုးခွင့်ကို ပုံဆောင်တယ်။ မကြာခင်မှာ ဒီကျောက်တုံးက ရုပ်တုရဲ့ခြေထောက်ကို ထိမှန်ပါတော့မယ်။ အာမဂေဒုန်မှာ ရုပ်တုရဲ့ခြေထောက်နဲ့ ကျန်အပိုင်းအားလုံး အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာ ဖျက်ဆီးခံရပါလိမ့်မယ်။ (ဒံယေလ ၂:၄၄၊ ၄၅ ကိုဖတ်ပါ။) ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်-အမေရိကန် ကမ္ဘာ့အာဏာစက်က အာမဂေဒုန်ရောက်တဲ့အထိ အုပ်စိုးနေမှာဖြစ်တယ်။ ဒီပရောဖက်ပြုချက် လုံးဝပြည့်စုံသွားမှာကို မြင်တွေ့ရမယ်ဆိုတာက တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲ။* ဒါဆိုရင် စာတန်ကို ယေဟောဝါ ဘာလုပ်မလဲ။
၁၅။ အာမဂေဒုန်ပြီးနောက်မှာ စာတန်နဲ့ ကောင်းကင်တမန်ဆိုးတွေ ဘာဖြစ်ကြမလဲ။
၁၅ ဦးဆုံး၊ စာတန်ဟာ မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ သူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး သူ့မျက်စိရှေ့မှာပဲ ပျက်စီးသွားတာကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ စာတန်ကိုယ်တိုင်ခံရမယ့်အလှည့်ပဲ။ ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို တမန်တော်ယောဟန်က ပြောပြတယ်။ (ဗျာ. ၂၀:၁-၃ ကိုဖတ်ပါ။) “ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည် လက်ထဲ၌ တွင်းနက်ကြီး၏သော့နှင့် သံကြိုးကြီးကိုကိုင်လျက် ကောင်းကင်မှ ဆင်းသက်လာ” တယ်၊ အဲဒီ ကောင်းကင်တမန်က ယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်၊ သူက စာတန်နဲ့ ကောင်းကင်တမန်ဆိုးတွေကို ချည်နှောင်၊ တွင်းနက်ကြီးထဲပစ်ချပြီး အနှစ်တစ်ထောင်ကြာအောင် ချုပ်ထားမှာဖြစ်တယ်။ (လု. ၈:၃၀၊ ၃၁; ၁ ယော. ၃:၈) ဒီနည်းအားဖြင့် မြွေရဲ့ခေါင်းက စပြီး အကြိတ်ခံရပါလိမ့်မယ်။*—က. ၃:၁၅။
၁၆။ “တွင်းနက်ကြီး” ထဲ ပစ်ချခံရခြင်းက စာတန်အတွက် ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲ။
၁၆ စာတန်နဲ့ ကောင်းကင်တမန်ဆိုးတွေ ပစ်ချခံရမယ့် “တွင်းနက်ကြီး” က ဘာလဲ။ ဒီစကားလုံးရဲ့ မူရင်းဂရိအဓိပ္ပာယ်က အလွန်တရာနက်၊ ဒါမှမဟုတ် အဆုံးမရှိတဲ့တွင်း ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတွင်းဟာ ယေဟောဝါနဲ့ “တွင်းနက်ကြီး၏သော့” ကိုကိုင်တဲ့ ကောင်းကင်တမန်ကလွဲလို့ ဘယ်သူမှမရောက်နိုင်တဲ့ နေရာဖြစ်တယ်။ စာတန်ဟာ အဲဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ချည်နှောင်ခံရမှာဖြစ်လို့ “လူမျိုးတို့ကို နောက်တစ်ဖန်မလှည့်ဖြားနိုင်” တော့ဘူး။ “ဟောက်သောခြင်္သေ့” ဖြစ်တဲ့ စာတန်ဟာ အဲဒီတွင်းထဲမှာ အသံမထွက်နိုင်ဘဲ ပါးစပ်ပိတ်နေရမှာဖြစ်တယ်။—၁ ပေ. ၅:၈။
၁၇၊ ၁၈။ (က) မကြာခင်မြင်တွေ့ရတော့မယ့် ဘယ်အဖြစ်အပျက်ငါးခုအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီလဲ။ (ခ) ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်မှာ ဘာဖြစ်လာမလဲ။
၁၇ အရေးကြီးပြီး ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ မကြာခင် ဖြစ်ပျက်လာပါတော့မယ်။ “ငြိမ်းချမ်းပြီ၊ လုံခြုံပြီ” ဆိုတဲ့စကား ဘယ်လိုပြည့်စုံလာမယ်ဆိုတာကို မြင်တွေ့ရဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ စောင့်မျှော်နေကြတယ်။ အဲဒီနောက် မဟာဗာဗုလုန် ပျက်စီးခြင်း၊ မာဂေါဂပြည်က ဂေါဂမင်း တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ အာမဂေဒုန်စစ်ပွဲ စတာတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မျက်စိနဲ့ မြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒီနောက် စာတန်နဲ့ ကောင်းကင်တမန်ဆိုးတွေ တွင်းနက်ကြီးထဲ ပစ်ချခံရမယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်ပျက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ မကောင်းမှုအားလုံး ပပျောက်သွားမယ်၊ အဲဒီအခါ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာအသစ်ဖြစ်တဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့ အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်ချုပ်မှုအတွင်းမှာ “များပြားသောငြိမ်သက်ခြင်း” ကို ခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်။—ဆာ. ၃၇:၁၀၊ ၁၁။
၁၈ ဒီဆောင်းပါးမှာ “မမြင်ရသောအရာ” ဒါမှမဟုတ် မဖြစ်သေးတဲ့ အဖြစ်အပျက် ငါးခုအကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ကြတယ်။ ဒါ့အပြင် “မမြင်ရသောအရာ” ဖြစ်တဲ့ နောက်ထပ် အဖြစ်အပျက်ငါးခုကိုလည်း “ကြည့်မှတ်နေ” ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို နောက်ဆောင်းပါးမှာ သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း—ယင်း၏မဟာအထွတ်အထိပ်နီးပြီ! စာမျက်နှာ ၂၅၁-၂၅၈ ကိုကြည့်ပါ။
ဒံယေလ ၂:၄၅ မှာပါတဲ့ “အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသော နိုင်ငံရှိသမျှ” ဆိုတာက ရုပ်တုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ တိုင်းနိုင်ငံ ဒါမှမဟုတ် ကမ္ဘာ့အာဏာစက်တွေကို ဆိုလိုတယ်။ နောက်ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်တစ်ခုက “လူနေထိုင်ရာ မြေတစ်ပြင်လုံးရှိဘုရင်များ” က စုရုံးပြီး ‘အတိုင်းအဆမဲ့တန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်၏နေ့ကြီး’ မှာ ယေဟောဝါကို တိုက်ခိုက်ကြမယ်လို့ ဖော်ပြတယ်။ (ဗျာ. ၁၆:၁၄; ၁၉:၁၉-၂၁) ဒါကြောင့် အာမဂေဒုန်မှာ ရုပ်တုကြီး ကိုယ်စားပြုတဲ့ တိုင်းနိုင်ငံတွေပဲ ဖျက်ဆီးခံရမှာမဟုတ်ဘဲ တခြားတိုင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးလည်း ဖျက်ဆီးခံရမှာဖြစ်တယ်။
အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးနောက် စာတန်နဲ့ ကောင်းကင်တမန်ဆိုးတွေ “ကန့်မီးအိုင်ထဲ” ပစ်ချခံရချိန်မှာ မြွေရဲ့ခေါင်း အပြီးသတ်ကြိတ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။—ဗျာ. ၂၀:၇-၁၀; မ. ၂၅:၄၁။